Moments leh saaxiibo 10
Mawduucyada looga hadlay sadarkaan waa sida kuwo dano guud leh oo ay soo jeediyeen akhristayaasha ereyga. DUGSIYADA LACAG LA'AAN, waxaan rabnaa inaan sii ahaano dhammaan waxa cinwaanku tilmaamayo. Looguma talagalin sinaba in lagu murmo. Su'aalaha ay soo gudbiyeen asxaabtu waxay isku dayaan in mid ka mid ahi uga jawaabo iyo qaabka saaxiibbada. Dood-wadaagyada dartood, muranka awgood, waa dhif iyo naadir in saaxiibtinimada loo ahaado.
Maqaalka soo socda, oo la helay wax yar ka dib arrinta WORD March, uma muuqdo inuu akhristaha si sax ah u yahay su’aalaha iyo jawaabihii hore ee hoos imanaya MADAXYADA LA XIRIIRA, laakiin iyada oo loo eegayo danta guud ee maaddooyinka laga wada hadlay iyo codsigii dambbanaha ee wariyaha. si loo soo daayo diidmadiisa Ereyga, RUUX wuxuu ka jawaabi doonaa diidmadiisa sida la codsaday, waxaa la fahamsan yahay in diidmooyinkaasi yihiin mabaadii'da iyo dhaqamada sayniska masiixiga, ee aan loo qaddarin shaqsiyaadka — Ed. Ereyga
New York, Marso 29, 1907.
Ku socota tifaftiraha ereyga.
Sir: Mawduuca Maarso ee ereyga 'EGO,' Saaxiib 'ayaa weydiya oo ka jawaabaya dhowr su'aalood oo ku saabsan Sayniska Masiixiyiinta. Jawaabahani waxay muujinayaan in qoraagu qaatay astaamo gaar ah oo aan ku habboonayn Sayniska Masiixiga, oo, haddii loo qaado gunaanadkooda macquulka ah, ay lamid yihiin kuwa aan ku habboonayn ku dhaqanka dhammaan qaybaha diinta. Su'aasha koowaad, "Ma khaladbaa in la adeegsado maskaxda bedelka qaab jireed oo lagu daaweeyo cudurada jirka?" Waxaa looga jawaab celiyay "haa." Waxaa la sheegay in "ay jiraan tusaalooyin qofku u xaq u leeyahay isticmaalka awooda fikirka si looga gudbo jirrooyinka jireed. , taas oo markaa aan dhihi karno ma ahayn qalad. Xaaladaha badankood waa khalad aad u qaldan in la isticmaalo maskaxda halkii loo isticmaali lahaa qaab jireed oo lagu daaweeyo jirrooyinka jidhka. ”
Haddii adeegsiga maskaxda macnihiisu uu yahay in qoraagu tilmaamayo waxqabadka hal maan aadanaha ka sarreeya maanka kale ee bini aadamka, si meesha looga saaro jirrooyinka jidhka, markaa waxaan kula raacsanahay isaga inay khaldan tahay xaalad kasta. Saynisyahano Masiixiyiin ah uma shaqeeyaan maskaxda bina aadamka si kasta oo ay uga saaraan jirrooyinka jidhka. Waxaa ku dhex jira farqiga u dhexeeya Sayniska Masiixiyiinta iyo sayniska maskaxda, oo ay iska indhotirtay “Saaxiib.”
Seynisyahanada Masiixiyiinta ah waxay adeegsadaan qaab diimeed, iyagoo u duceeya oo keliya, si ay cudurrada uga daaweeyaan. Rasuul Yacquub wuxuu yidhi, "Salaadda iimaanka waxay badbaadin doontaa bukaanka." Sayniska Christian wuxuu barayaa sida loo sameeyo "salaadda iimaanka," iyo, maadaama bukaanka lagu bogsado salaadda masiixiga Christian, waxay caddeyn u tahay inay tahay "salaadda iimaanka. ”“ Saaxiib ”ayaa si qarsoodi ah u jahwareeriyay daaweynta cilmiga Christian iyo daaweynta maskaxda. Sayniska Christian wuxuu ku tiirsan yahay Ilaah oo dhan, salaadda, halka loogu yeero sayniska maskaxda, ha ahaato mid ku shaqeysa talo soo jeedin maskaxeed, hypnotism, ama mesmerism, waa qalliinka maanka aadanaha ee maanka kale. Natiijooyinka kiiska dambe waa mid laga gudbo oo waxyeello leh, waxayna si buuxda ugu qumman tahay cambaareynta loo soo mariyey ficilkan “Saaxiib”. Ma jiro qof, hase yeeshe, ma diidi karto baryada ilaahay, mana jiro qof oran kara ducada daacadda ah ee qof kale weligiis noqon karo. waxyeelo leh.
Su'aal kale ayaa ah, "Ciise iyo qaar badan oo ka mid ah quduusiintu miyaanay ku bogsanin jirrooyinka jidhka xagga maskaxda, haddii ay sidaas tahayna, miyey khalad ahayd?"
Markii laga jawaabayay su'aashan "Saaxiib" waxay qireen inay bogsadeen kuwa buka, iyo inaysan khalad ku ahayn iyaga inay sidaas sameeyaan. Wuxuu yidhi, si kastaba ha ahaatee, "ciise iyo quduusiintu lacag kuma helin lacagtooda," wuxuu kaloo yidhi, "Siduu uga duwan yahay ciise ama si aan qasab ahayn ay u muuqato midkood ama ciise iyo mid kamid ah xuriyada midkoodna inay ku dallacsiiyaan booqashooyinkasta bukaan kasta, daawo ama daawo ha lahaadee.
Xaqiiqadu waxay tahay in Ciise bogsiiyey kuwa buka, oo uu xertiisii ​​baray sida loo sameeyo sidoo kale. Xertiisani waxay noqdeen kuwo baray kuwa kale, oo saddex boqol oo sano xoogga lagu bogsado ayaa kaniisadda masiixiga si joogto ah u isticmaali jirtay. Markii ugu horreysay ee Ciise diray koox xertiisa ah oo leh amar ah inay injiilka ku wacdiyaan oo ay kuwa buka bogsiiyaan, wuxuu ku amray inaanay aqbalin bixinta khidmadooda. Markuu diray waqtiga ku xiga, si kastaba ha ahaatee, wuxuu u sheegay inay shaqadooda wataan, wuxuuna caddeeyay in "shaqaaluhu uu mudan yahay inuu mushahaarkiisa qaato". Qoraalkan ayaa la aqbalay ku dhawaad ​​laba kun oo sano oo ah awooda ku filan ee wadaaddada iyo qaar kale ayaa ku hawlan shaqada Christian si ay u aqbalaan magdhowga adeegyadooda, mana jiri karto sabab macquul ah oo loo sameeyo marka laga reebo kiisaska saynisyahano Christian. Wadaadada waxaa loo shaqeeyaa kaniisadaha si ay u wacdiyaan oo u tukadaan, iyo inta badan kiisaska waxaa la siiyaa mushahar go'an. Xirfadlayaasha cilmiga masiixiga waxay labaduba wacdiyaan injiilka iyo tukashada, laakiin ma helaan mushahar go'an. Dacwaddoodu waa mid aad u yar sidii wax yar, oo waxaa si mutadawacnimo ah u bixisa shakhsiyaadka raba gargaarkooda. Wax qasab ah oo ku saabsan arrintaas ma jiraan, xaalad kastoo ay tahayna waa arrin shakhsiyeed oo ka dhexeysa bukaanka iyo xirfadlaha oo aan cidna dan ka lahayn. Si uu u noqdo cilmiga Sayniska Masiixiyiinta, qofku waa inuu iska daayaa ganacsiga cilmaani ah oo uu waqtigiisa oo dhan ku qaataa shaqada. Si tan loo sameeyo, waa inay ugu yaraan haystaan ​​habab loogu talagalay baahiyaha caadiga ah. Haddii aan loo sameyn magdhow waxaa muuqata in masaakiinta laga saari doono gebi ahaanba shaqadan. Su'aashan waxaa xalliyay kaniisadda masiixiga ee masiixiga ah oo ku saleysan si ku habboon una habboon qancinta dhinacyadu laftooda. Ma jiraan wax cabasho ah oo ka imanaya kuwa u soo jeedsada Sayniska Masiixiga ah caawimaad inay iyagu lacag xad dhaaf ah leeyihiin. Cabashada noocan ah badiyaa waxay ka timaadaa kuwa aan wax shaqo ah ku lahayn Sayniska Masiixiga. Dhacdo kasta, waa in ay qirato dhammaan kuwa doonaya in ay ula dhaqmaan maaddada si caddaalad ah, in haddii ay sax tahay in la bixiyo wadaaddada si ay u wacdiyo, oo ay u duceeyaan bukaanka soo kabashada, waxaa sidoo kale xaq u leh in la bixiyo saynisyahan Masiixi ah oo noocaas ah adeegyada.
Xaqiiqdii adigaa iska leh.
(Waa la saxeexay) VO STRICKLER.
Su'aal weydiiyaha ayaa sheegaya in "waxaan qaadnay aag aan u qalmin sayniska masiixiga, oo, haddii loo qaado gunaanadkooda macquulka ah, aan loo wada jecleyn dhammaan hay'adaha diinta."
In dhismayaashu aysan ku habboonayn sayniska masiixiga waa run, laakiin ma aragno sida ka soo gunaanadkooda macquulka ah ee dhismayaashaas ay u ahaan laheed mid aan ku habboonayn ku dhaqanka dhammaan hay'adaha diinta. Sayniska Masiixigu wuxuu ku adkaystay in waxbaristiisa ay ka duwan tahay caqiidooyinka casriga ah, taasina shaki la'aan waa run. Sababtoo ah dhismayaashaas ayaan ku habboonayn sayniska masiixiga, sinaba looma raacayo inay isla dhismayaashaas ay khuseeyaan dhammaan qaybaha diinta; laakiin haddii dhammaan qaybaha diimeed ay diidaan xaqiiqda oo ay sheegaan been-abuurka, markaa waa inaan si aad ah uga liidan u noqonaa iyaga dhismayaashayada caqiidooyinkooda iyo dhaqankooda, marka munaasabaddu u baahan tahay in aragtideena la muujiyo.
Isaga oo tixraacaya su’aasha ugu horeysa iyo jawaabta ay kujirto, oo kasoo muuqday bishii Maarso WORD, 1907, qoraaga warqadda kor ku xusan wuxuu oranayaa sadarka 2aad inuu nagu raacsan yahay “howlgalka hal maan aadanaha ku haya maanka kale ee bini’aadamka, si meesha looga saaro jir ahaan jira, waa khalad xaalad kasta. ”
Markii aad aqrinaysid tan, su'aashu waxay si dabiici ah u kacaysaa, markaa maxaa loo baahan yahay diidmo dheeraad ah ama dood; Laakiin waxaan la yaabnay hadallada soo socda: "Saynisyahannada Masiixiyiinta ah uma shaqeeyaan maskaxda bina-aadamka kiis kasta si ay uga saaraan jirrooyinka jidhka."
Hadday run tahay in maanka aadanaha uusan u adeegsan saynisyahano Christian ah dadaalkiisa iyo dhaqankiisa inuu meesha ka saaro jirrooyinka jirka, markaa kiiska waa laga saaraa maxkamadaha adduunka, markaa uma baahna maxkamad kasta oo baaritaan ah. Sidaa darteed saynisyahanka Masiixiyiinta ah looma baahna inuu ka hadlo wax faallooyin ah oo ku saabsan dhaqankiisa, waana mid ka timid BILAASH MADAXWEYNE IYADOO UU ISKU DUWANAYO inuu wax ka qabto mowduuc aan ku xirneyn maskaxda aadanaha. Laakiin uma eka in ay macquul tahay in bayaankan oo kale si run ah loo sameeyo. Haddii lagu andacoodo inay tahay maskaxda rabbaaniga ah (ama nooc kale oo maanka ah) oo meesha ka saaraya jirrooyinka jirka, ee aan ahayn maskaxda aadanaha, markaa sidee maskaxda caqliga aadanaha la'aantiis ay rabitaanka rabbaaniga ah ku dhaqaaqi kartaa? Haddii maanka rabbaaniga ah, ama mabda 'kasta oo saynisyahanku sheegto, ficillo sidee bay ku kacaysaa ficilkaas iyadoo aan la soo jeedin ama shaqo laga helin maskaxda aadanaha? Laakiin waa in maanka rabaani ah uu awood u leeyahay inuu kudhaqmo oo meesha ka saaro jirrooyinka jirka iyadoon shaqo la laheyn ama adeegsan maskaxda maskaxda, markaa maxay tahay sababta faragelinta saynisyahano masiixi ah inay lagama maarmaan u tahay in meesha laga saaro jirrooyinka jirka nooc kasta ha ahaadeene? Dhanka kale, waxa kaliya ee lagu bedeli karo ayaa ah in wax kasta oo rabaani ah ama maanka aadanuhu uusan ka shaqeynaynin ka saarida cudurada jirka. Haddii taasi sidaas tahay, sidee ayaynu nahay bini-aadamka, iyadoo aan loo adeegsan maskaxda maanka aadanaha, si aan u ogaano ama u nugulno jirrooyinka jirka, ama maskaxda rabbaaniga ah, ama maskaxda aadanaha, inay jiraan. Qoraaga warqaddu wuxuu ku soo gabagabeeyay farqada labaad isagoo leh: “Waxaa jira farqi u dhexeeya Sayniska Masiixiyiinta iyo sayniska Maskaxda, oo ay iska indhatirayaan 'Saaxiib.' ''
Waxaan qiraynaa inaynaan garanayn kala duwanaanshaha u dhexeeya sayniska masiixiga iyo sayniska maskaxda. Kala soocidda saynisyahannada masiixiga ahi waxay door bidaysaa saynisyahannada cilmi-nafsiga, taas, marka loo eego bayaanka ku xusan warqaddan, saynisyahannada maskaxdu wali way adeegsadaan maskaxda bini-aadamka, halka saynisyahanka Masiixiyiintu aanu isticmaalin.
Bilowga cutubka saddexaad qoraaga warqaddu wuxuu yidhi: "Saynisyahanada Masiixiyiinta ah waxay adeegsadaan dariiqo ruuxiga ah salaadda kaliya si ay u daaweeyaan cudur. Rasuul Yacquub wuxuu yidhi, 'Salaadda iimaanka waxay badbaadin doontaa kuwa buka.' ''
Hadaladaani waxay jahwareeraan halkii ay ka fasiri lahaayeen oraahyada kore. Su'aasha si dabiici ah u soo baxeysa, waa maxay farqiga uu qoraagu ugu talo galay inuu ku dhex maro dariiqada ruuxiga ah iyo habka maskaxda? Maskaxda, cilmi-nafsiga, iyo cilmi-nafsiga hiwaayadda, dhammaan ficillada aan la rumeysaneyn inay u sabab yihiin jir ahaaneed waxay ku hoos dhacaan madaxa caadiga ah oo loo yaqaan midkood maskaxiyan, maskax ahaan, ama ruux ahaan; doorbidayaa ruuxiyan. Ma cada sida Qoraagu u doonayo inuu adeegsado weedha 'macne ahaan ruux ahaaneed,' marka laga reebo inuu haysto ducadu inaynan ahayn hawl maskaxeed. Laakiin haddii salaadda aysan ahayn qalliin maskaxeed, ama aysan ku xirnayn maskaxda aadanaha, markaa waa maxay salaaddu? Waa kuma qofka tukanaya? Muxuu ka tukadaa, yaase u duceeya, maxaase u leh?
Haddii qofka tukanayaa uu yahay saynisyahan Masiixi ah, sidee buu u bilaabi karaa ducadiisa isaga oo aan maskaxda aadanaha ka ahayn? Laakiin haddii uusan ahayn bini'aadamka oo uu noqday rabaani, markaa uma baahna inuu tukan maayo. Haddii mid tukado, waxaan u qaadannaa in ducadiisu lagu jihaysanayo awood ka sarraysa tiisa, sidaa darteed salaadda. Hadduu bina aadam yahayna waa inuu maankiisa u adeegsadaa inuu ku tukado. Qofka tukanaya waa inuu ku tukadaa wax. Ujeedadu waxay tahay, inuu ku tukado ku saabsan jirrooyinka jirka, iyo in cuduradaas jidheed laga saari doono. Haddii salaadda la soo dejiyo ay tahay ka saarista jirrooyinka jidhka, qofka bini-aadamka ah ee tukanaya waa inuu adeegsadaa bini-aadamnimadiisa iyo maankiisa si uu u ogaado jirrooyinka jirka oo uu weydiisto ka-saaritaankiisa waxtarka masiibada aadanaha. Tukashadu waa farriinta ama codsi looga hadlayo qofka, awoodda ama mabda'a qofka looga saarayo jirrooyinka jidhka. Waxaa la sheegay in salaadda loo duceeyo Eebbe; laakiin qofkii raba inuu si wax ku ool ah uga hadlo farriin ama codsi ka hooseeya, loo siman yahay, ama ka sareeya, waa inuu ogaadaa sida loogu xalliyo farriintaas ama codsigelinta qaab lagu heli doono waxyaabaha la doonayo. Qofka tukanaya ama ducaysan maayo codsi ka hooseeya naftiisa, maaddaama aysan bixin karin codsigiisa, mana weydiisan doono mid ka mid ah inuu la mid yahay inuu sameeyo waxa isaga qudhiisa uu sameyn karo. Sidaa darteed waa macquul, in la malaynayo in kan uu ka codsado inuu ka sareeyo. Haddii isagu awood xagga sare ka leeyahay oo xagga xigmadda oo dhan xigmad ku dheehan tahay, markaa codsigu waa inuu noqdaa mid lagu xusayo kii loogala hadlay wax uusan aqoon. Hadduusan isagu garanaynin, isagu dhammaan ma caqli badan yahay; laakiin haddii uu taas ogyahay, waa ficil fuleynimo ah iyo khalkhal gelin ah codsadaha si uu u codsado caqli xigmad leh oo awood badan leh si uu u qabto ficil, iyada oo codsigaasi uu muujinayo in caqliga caqliga leh midkoodna dayacay. in la sameeyo wixii ay ahayd inuu sameeyo, ama ma uu ogayn inay tahay in la sameeyo. Haddii loo oggolaado, dhanka kale, in sirdoonku uu yahay mid caqli badan oo caqli badan, laakiin aan naftiisa kala tashan arrimaha aadanaha, markaa qofka wax shafeeca ah ama duceeya ka saarista cudurrada jidheed waa inuu ka warqabo jirrooyinkaas jidheed. wuxuuna adeegsadaa maankiisa bini'aadamka hab bilow ah si loo ogaado jirrooyinka jirka iyadoo loo duceeyo ilaaha, sirdoonka. Codsigu waa inuu ahaadaa ka saarista jirrooyinka, sidaa darteed xaalad kasta oo maskaxda ku jirta waxaa loo isticmaalaa dhammaystirka jidhka. Bilowgu waa jir ahaaneed, howshu waa inay noqotaa mid maskaxeed (wax kastoo kale oo soo socdaa); laakiin dhamaadka waa jir ahaan.
Marka loo eego salaadda iimaanka, su'aashu waxay tahay: waa maxay iimaanku? Nooc kasta oo binu-aadmiga ahi waxay leeyihiin iimaan, laakiin iimaanka mid ma aha iimaanka kuwa kale. Rumaysadka sixirbararka natiijooyinka guulaha camalkiisa ayaa ka duwan iimaanka saynisyahanka Masiixiyiinta ah ee laga yaabo inuu ku guuleysto howlihiisa, labadooduna waxay ku kala duwan yihiin iimaanka Newton, Keppler, Plato, ama Masiixi. Xamaasad leh caqiido indha la 'ilaahdiisa alwaax ah waxay heshaa natiijooyin sida kuwa kor ku xusan oo waliba iimaanka leh. Waxa loogu yeedho ficil guul ayaa laga yaabaa inay ku salaysnaato aaminaad indho la ', qiyaasta kalsoonida, ama aqoonta dhabta ah. Natiijooyinka waxay noqon doonaan sida iimaanka. Mabda 'rumaysigu waa isku mid, laakiin rumaysadku way ku kala duwan yihiin heerka garaadka. Sidaa darteed, haddii saynisyahannada Masiixiyiinta ahi ay ku andacoodaan inay ku bogsiinayaan tukashada iimaanka, markaa bogsiinta la sameeyay waa inay ahaato mid ku saleysan heerka iimaanka ee adeegsigeeda caqliga leh. Waxay noqon kartaa infernal ama rabaani; laakiin si kasta ha noqotee, maxaa yeelay Rasuul Yacquub wuxuu yidhi “baryada iimaanka waxay badbaadin doontaa kuwa buka,” sidaa ma yeelayso. Xaqiiqadu waa markhaatiyaasha oo ma aha Rasuul James.
Qoraa wuxuu sii wadaa: '' Saaxiib 'wuxuu si qarsoodi ah u jahwareeray daaweynta Christian Science iyo daaweynta maskaxda. "
Haddii ay taasi dhacdo, “Saaxiib” wuxuu qirayaa qaladkiisa; weli ma arkin sida saynisyahano Christian ah ay u baran karaan sida loo sameeyo, iyo '' 'salaadda iimaanka,' 'iyadoo aan loo adeegsan maskaxdooda. Shakigani wuxuu u muuqdaa mid lagu taageerayo bayaankan soo socda: “Sayniska Christian wuxuu ku tiirsan yahay Ilaah oo dhan xagga ducada, halka loogu yeero sayniska maskaxda, ha ahaato mid ku shaqeysa talo bixin maskaxeed, hypnotism ama mesmerism, waa qaliinka hal maanka aadanaha xagga maanka kale. . Natiijooyinka kiiska dambe waa mid ku meel gaadh ah oo waxyeello leh, waxayna si buuxda ugu qalmaan cambaareynta cambaareynta noocan ah ee 'Saaxiib.' ''
In kasta oo aan halkan ugaga hadlin saynisyahannada dhimirka oo aan dhahno odhaahyada kor ku xusan waa sax yihiin, wali waxay ku jiraan buugaagkooda saynisyahano maskaxeed oo ay weheliyaan saynisyahano Masiixiyiin ah inay isku halleeyaan Ilaah ama erey kasta oo ay u magacaabaan Ilaah. Kani ma cadeynayo farqiga u sheegto Qoraagu, sababaha horey u horumarey. Bogsiyooyinka ay soo saareen saynisyahano maskaxeed ayaa lagu sheegaa inay yihiin kuwo wax ku ool ah oo ay u badan yihiin kuwa ku habboon sida kuwa daaweynaya saynisyahano Christian ah. Wax kasta oo mabda 'u leeyahay dawaynta ay ka mid noqon karto, daawooyinka waxaa lagu daaweeyaa labada nooc ee "saynisyahano". Sheegashada, si kastaba ha noqotee, qoraaga warqadda kor ku xusan ee sayniska masiixiga ayaa si weyn loogu dhawaaqaa, sida uu ku dhaleeceeyay cambaareyntiisa saynisyahannada maskaxda. kii uu u xanaaqsan yahay. Tan waxaa lagu cadeeyay isticmaalka iyo maqnaanshaha xarafyada waaweyn marka loo eego ereyada "sayniska masiixiga" iyo "sayniska maskaxda." Waraaqda oo dhan ereyada "Sayniska Christian" ama "saynisyahano" ayaa ah kuwo aasaasi ah, halka laga hadlayo sayniska maskaxda ama saynisyahano, caasimadaha si muuqata ayay u maqan yihiin. Dhamaadka sadarka kore waxaan aqrinay: "Majiro, sikastaba, ma diidi karo baryada ilaahey, qofna ma dhihi karo ducada daacadda ah ee qof kale weligiis wuxuu noqon karaa waxyeello."
“Saaxiib” waa ay taageertay bayaankan, laakiin waa inuu ku daraa ducadaas mid kale, inuu noqdo mid daacad ah oo faa'iido leh, waa inuu noqdaa mid aan ikhtiyaar lahayn; Tukashada in kasta oo ay tahay waxtarka muuqda ee mid kale, haddii ay jirto in magdhow shaqsiyeed ama helitaan lacag ah, laguma koobi karo laakiin waa la iska daayaa oo waa la iska joojiyaa si aan kalgacal loo yeelo, maxaa yeelay faa iidooyinka shaqsiyadeed waa in la helaa oo aan ahayn dheefaha ka imanaya aqoonta qabashada adeegga.
Baaragaraafka bilowga ah: "Xaqiiqadu waxay tahay in Ciise bogsiiyey kuwa buka, oo uu xertiisii ​​baray sida loo sameeyo sidoo kale," Wakiilkayaga noo soo diraa wuxuu isku dayaa inuu caddeeyo sharciyada ficillada sayniska masiixiga ee bixinta, isagoo soo socda: "Markii Ciise ugu horreeyay Wuxuu diray koox xertiisa ah oo leh amar ah inay injiilka ku wacdiyaan oo ay kuwa buka bogsiiyaan, wuxuuna ku amray inayan aqbalin bixinta khidmadooda. Markuu diray maalintii xigtay, si kastaba ha ahaatee, wuxuu u sheegay in ay qaataan shaqaalahooda, oo wuxuu caddeeyey 'shaqaaluhu waa istaahilaa abaalgudkiisa.' ''
Tixraaca ugu horreeya ee Axdiga Cusub ee lagu dabaqayo bayaanka Wakiilkayaga waxaa laga helay Matayos, cutubka. x., vs. 7, 8, 9, 10: “Oo intaad socotaan wacdiya, oo leh, Boqortooyadii jannadu waa dhow dahay. Kuwa bukana bogsiiya, kuwa baraska ahna nadiifiya, sarakiciya kuwii dhintay, jinniyada saara. ; Provide Provide Provide Provide your your Provide es Provide your Provide Provide Provide Provide Provide your your your Provide Provide Provide Provide Provide Provide neither your Provide Provide your Provide Provide Provide Provide silver Provide Provide Provide Provide Oo dahabkiinnana lacag ha ku bixinina, ama lacag ama naxaas. ama laba khamiir, ama laba kabood, ama kabo, ama ul. waayo, shaqaaluhu cuntadiisa ayuu istaahilaa.
Ma arki karno wax kor ku xusan oo aan ku amreyno saynisyahano Christian ah in lagu saxo magdhow. Dhab ahaantii qoraalka "si xor ah ayaad u hesheen, si xor ah u bixi," ayaa ku doodaya.
Markos, cutubka. vi., vs. 7-13, waxaan helnaa: “Markaasuu u yeedhay laba-iyo-tobankii, oo bilaabay inuu u diro laba iyo laba, wuxuuna siiyey amar ay ku jinniyada ku daahiriyaan; oo wuxuu ku amray inayan waxba qaadan sodcaalkooda, ul aan badnayn mooyaane. Kibis iyo qandi iyo lacag kiishad ku jirta ha qaadanina. Kabo gashada, oo laba khamiis ha gashan …… Markaasay baxeen oo waxay wacdiyeen dadkii si ay u toobad keenaan. Jinniyo badan ayay saareen, dad badan oo bukayna saliid bay mariyeen, wayna bogsiiyeen.
Kor ku xusan kama doodo iyada oo door bidaysa dhaqanka saynisyahano Christian ah, iyo run ahaantii saynisyahano Christian ma sheegan karaan inay raacaan tilmaamaha kore.
Tixraaca xigta ee aan ka helno Luukos, cutubka. ix., vs. 1-6: “Markaasuu wuxuu u yeedhay laba-iyo-tobankii xertiisii, oo wuxuu siiyey xoog iyo amar ay jinniyada oo dhan ku saaraan, iyo inay cudurrada ku daaweeyaan. Wuuna diray inay boqortooyadii Ilaah ku wacdiyaan dadka oo ay bogsiiyaan kuwa buka. Wuxuuna ku yidhi, Waxba safarka ha u qaadanina, ama ul, ama qandi, ama kibis, ama lacag. Laba khamiisna ha qaadanina. Guri alla gurigaad gashaan, halkaasay iska jiraan, oo halkaasay ka baxeen …… ..waxayna tageen, oo magaalooyinka dhex maraan oo ku wacdiyeen injiilka, oo meel walba waad ku bogsiinayaan. Ma jiraan wax ku xusan magdhowga, iyo tilmaamaha la midka ah ee ku saabsan maqnaanshaha mushaharka, cadaynta dharka, waa la arki karaa. Waxyaabaha kor ku xusan ma taageerayaan Wakiilkayagii sheegashadiisa.
Tixraaca xigta waa Lukos, cutubka. x., vs. 1-9, meeshii la yidhi: "Waxyaalahaas ka dib, Sayidku wuxuu doortay toddobaatan kale, oo wuxuu u diray laba laba ka hor wejigiisa magaalo kasta iyo meeshuu isagu isagu tagi lahaa …… Ha qaadin boorso, ama kabo, ama kabo; oo jidka ha ku salaamanina. Guri alla gurigaad gashaan, horta waxaad ku tidhaahdaan, Gurigan nabad ha u ahaato. Ina nabdeed hadduu halkaas joogo, nabaddiinnu waxay ahaan doontaa dushiisa, haddii kalese way idinku soo noqon doontaa. Gurigaas qudhiisa jooga, idinkoo cunaya oo cabbaya waxay cunaan, waayo, shaqaaluhu waa istaahilaa abaalgudkiisa. Guriba guri ha uga aadin. Oo magaalo alla magaaladaad gashaan oo ay idin soo dhoweeyaan, waxaad cuntaan wixii idiin hor yaal, oo buka kuwa buka oo halkaas jooga, oo waxaad ku tidhaahdaan, Boqortooyada Ilaah waa idinku soo dhow dahay.
Waxa kor ku xusan oraahda ee "in shaqaaluhu mudan yahay inuu mushahaarkiisa qaato"; laakiin shaqaalayntu waa mid cad oo ah “cunista iyo cabista waxyaabaha ay bixiyaan.” Xaqiiqdi marka loo eego tixraac ahaan Wakiilkayagu ma sheegan karo xaqa uu u leeyahay magdhow aan ahayn cunista fudud iyo cabitaanka ee lagu siiyay guriga bukaanka. Dhammaan tixraacyada illaa iyo hadda waxay ka soo horjeedeen helitaanka magdhow aan ka ahayn cuntada iyo hoyga la siiyo dawada. Iyo sida lagu muujiyey MOMENTS WITH saaxiibbada, dabeecadda had iyo jeer waxay tan u fidisaa dhakhtarada runta ah.
Hadda waxaan u jeesanaynaa tixraaca ugu dambeeya, Lukos. cutubka. xxii., vs. 35-37: Markaasuu ku yidhi, Goortaan idin diray kiishadla'aan, iyo qandiyo iyo kabola'aan, wax ma u baahdeen? Waxay yidhaahdeen, Maya, waxba. Markaasuu ku yidhi, Laakiin haddeer kii kiishad qabaa ha qaato, sidaas oo kalena qandi ha qaato. Kii aan midna qabinna, dharkiisa ha iibiyo, oo midna ha iibsado. Waayo, waxaan idinku leeyahay, Waa inuu igu dhammaado qorniinkan leh, Isaga waxaa lagu tiriyey sharcilaawayaasha, Waayo, waxa igu saabsan ayaa dhammaaday.
Micnaha aayadaha hore waxay u muuqdaan in Ciise uusan mar dambe la joogi doonin xertii, oo ay ahayd inay iyagu la dagaallamaan jidkooda; laakiin gabi ahaanba ma jiro tixraac loo bixiyo magdhowga cudurka. Xaqiiqdii, tilmaamaha qaadashada boorsooyinkooda iyo shaashadooda oo ay weheliso waxay soo jeedin karaan kasoo horjeedda magdhowga: inay iyagu iska bixin lahaayeen jidkooda. Xaqiiqadan, waxa shaqaalaheenna soo gudbinta ay u marayaan inay yihiin caddeyn lagu taageerayo sheegashada iyo dhaqamada sayniska masiixiga, ay u muuqato inay ka soo horjeedaan. Wakiilkayaga ayaa dhaawacay kiiskiisa waxa uu ku hormarinayo isaga. Tilmaamaha uu bixiyay Ciise looma raacin ruuxa iyo xarafka labadaba. Saynisyahannada Masiixiyiinta ahi Masiixiyiin ma aha ee waxbaristooda sidoo kale ma yihiin xerta Ciise; Iyagu waa xerta Mrs. Eddy, iyo baraarujinta caqiidooyinkeeda, mana laha xuquuq ay ku hormariyaan waxbarista Ciise midkoodna baridooda ama Mrs. Eddy ama taageeradooda sheegashadooda iyo dhaqankooda.
Wakiilka oo sii wacaya: “Qoraalkan waxaa la aqbalay ku dhawaad ​​laba kun oo sano, iyadoo ah awood ku filan wadaaddada iyo dadka kale ee ku hawlan shaqada Masiixiyiinta, in ay aqbalaan magdhowga adeegyadooda, isla markaana aysan jirin sabab macquul ah oo loo sameeyo marka laga reebo kiiska. ee Saynisyahannada Masiixiyiinta ah. ”
Uma muuqato wax sax ah in saynisyahano Christian ah inay raacaan dhaqamada qaarkood ee wadaaddada kaniisadda masiixiga, isla markaana ay raalli gelin ka bixiyaan aqbalaadda magdhowga sababta oo ah wadaaddada ayaa sidaas sameeya, isla mar ahaantaasna gabi ahaanba iska indhatiraya kiniisadda masiixiga caqiidooyinkeeda, iyo iskuday inaad kudajiso Masiixiyiinta by Science Science. Kaniisadda masiixiga waxay ilaalisaa dhaqamada qaarkood waxayna baraysaa caqiidooyin gaar ah, kuwaasoo boqolaal kun oo ka mid ah dadka masiixiyiinta ah ay cambaareynayaan, iyo hogaamiyaasha kiniisadda masiixiga ee diin walba oo ka soo horjeedda waxbarista Ciise, in kasta oo ay haystaan ​​caqiidooyinka; laakiin tani wax lug ah kuma leh khaladka, haddii ay khaldan tahay, saynisyahano Christian ah inay aqbalaan lacag loogu saaro jirrooyinka jireed xagga maskaxda, ama, haddii weedha la doorbido, xagga ruuxiga ah, maxaa yeelay haddii Ilaah ama macnaha ruuxiga ah, saamayn ku Daaweynta, ka dib dawadu waxay ka timid xagga Ilaah, waana hadiyad xagga ruuxa ah, oo saynisyahan Masiixi ah xaq uma leh inuu ku aqbalo lacag jireed meeshii aanu wax ku daweynayn, oo wuxuu ku helayaa lacag been abuur been ah.
Qoraa wuxuu sii wadaa: “wadaadada waxaa shaqaaleeya kaniisadaha si ay u wacdiyaan oo u tukadaan, inta badana kiisaska waxaa la siiyaa mushahar go'an. Xirfadlayaasha cilmiga masiixiga waxay labaduba wacdiyaan injiilka waxayna tukadaan, laakiin ma helaan mushahar go'an. "
Tani shaki la'aan waa run, laakiin, ragga ganacsiga fiican, waxay ururiyaan mushahar waqtigooda iyo shaqadooda. Isagoo sii wadaya su'aasha magdhowga, Qoraa wuxuu yiri: "Lacagtooda waa yar tahay mid yar, waxayna si mutadawacnimo ah u bixisaa shakhsiyaadka raba gargaarkooda."
In eedeyntu ay yar tahay oo ay yar tahay isla markaana si iskood ah loogu bixiyay si macquul ah waxay noqon kartaa isla dareenka ninku inuu iska dhiibo boorsadiisa markii uu u maleeyo inuu sifiican lahaa, ama in maaddo aad u liita ay si iskood ah u shaqeyso hantidiisa oo ay lacagtiisa siiso hypnotist. Sheegashada saynisyahannada masiixiga ahi aysan lahayn mushahar go'an oo eedeymaha lagu soo oogay ay yihiin kuwo aad u yar oo u muuqda wax aan macquul ahayn, waa mid aad u caqli badan oo waa inay rafcaan u keenaan aqoonta akhristaha. Dakhliga qaar ka mid ah xirfadleyaasha iyo aqristayaasha kaniisadda sayniska masiixiga ah ayaa "aad u yar oo aan wax yar u ahayn" kaliya marka la tixgeliyo suurtagalnimada mustaqbalka dakhliga saynisyahanka Masiixiyiinta ah.
Iyadoo la tixraacayo Qoraalka Wakiilkayaga 'in dacwadooda ay aad u yar tahay oo ay u yar tahay wax aan fududayn,' iyo "Su'aashan waxaa xalliyay kaniisadda Sayniska Masiixiyiinta iyada oo lagu saleynayo si ku habboon isla markaana ku qanacsan dhinacyada laftooda. Ma jiraan wax cabasho ah oo ka imanaya kuwa u soo jeedsada Sayniska Masiixiyiinta ah caawimaad ay ka helaan lacag xad dhaaf ah.
Waxaan ka soo sheegnay arrimaha soo socda xaaladaha badan ee nalagu soo yeeray. Injineer wadada tareenka maxalliga ah wuxuu lahaa kalgacal dareemo ah oo garabka midig kaas oo ku hanjabay inuu shaqada u awoodi doono. Caawinaad la'aan waxaa laga raadiyay dhakhaatiir badan. Qalabkii dhakhtarkiisa ayaa la raacay mar alla markii ay suurta gasho, shaqaalihiisii ​​la shaqeeyana xitaa waxay siiyeen dariiqii uu ugu mari lahaa safarka bada sida lagu taliyay. Laakiin tani kama dhicin wax faa'iido ah. Ka dib wuxuu tijaabiyey xirfadle cilmiyaysan oo masiixiga ah waana uu yara raaxaystay. Tani waxay keentay inuu ku biiro diinta wuxuuna noqday rumeeye adag, wuxuuna isku dayay inuu badalo asxaabtiisa oo dhagaysan doona isaga. Laakiin isagu ma bogsan. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa la waydiiyey, sababta, haddii isaga inbadan la caawin lahaa, ku-takhasuskiisa cilmiga sayniska masiixiga ma daaweyn karo. Jawaabtiisu waxay ahayd: "Ma awoodo inaan haysto isaga oo i daaweynaya." Markii la weydiiyay sharaxaad, wuxuu sheegay inay qaadatay lacagtii uu isku xoqi lahaa oo dhan si loo dajiyo sida uu markaas yahay, isla markaana uusan heli karin Lacag ku filan in si wada jir ah looga bogsado. Wuxuu kaloo sharraxay in saynisyahanka Masiixiyiintu aanu awoodin inuu siiyo wakhti ku filan oo uu wax kaga qabto dawo dhammaystiran haddii aan lacag laga siinin mooyee; in saynisyahanka Masiixiyiintu ay tahay inuu ku noolaado, isla markaana uu ku tiirsan yahay noloshiisa mushaharka uu helay oo uu ka helo daawooyinkiisa, wuxuu daweyn karaa oo keliya kuwa awoodi kara inay bixiyaan daawooyinka. Qaybtan sayniska ah ee Masiixiyiintu waxay umuuqatay inay ufilatay inay ku habboonayd in aan la dawayn karin haddaanu haysan lacag lagu bixinayo dawayntiisa.
Isaga oo sii hadlaya mowduuca ah inuu lacag ka helo bukaanka faa iidooyinka la siiyay, ayuu Saxafiga u sheegay: "Wax qasab ah oo arintaas ku saabsan ma jiraan, xaalad kastoo ay tahayna waa arin shaqsi ah oo udhaxeysa bukaanka iyo xirfadlaha, taas oo dadka dibada jooga aysan khusaynin."
Sida muuqata, ma jiro wax khasab ah oo ku saabsan helitaanka lacagta ama bixinta. Tani waa su'aal u baahan in lagu soo daro, laakiin Wakiilka Wakiilka si fudud ugama saari karo arrinta qaybta dambe ee xukunka. In dadka banaanka ka ah aysan dan ka laheyn arrimaha shaqsiyeed ee ka dhexeeya nin iyo ninku waa run; laakiin tani ma khusayso ku dhaqanka cilmiga masiixiga. Sayniska masiixiga wuxuu iskudayaa inuu caqiidadiisa la ogaado, dhaqamadeeduna maahan mid kaliya oo dano gaar ah iyo dano shaqsiyeed ka dhexeeya nin iyo nin. Ku dhaqanka sayniska masiixiga waa arin guud. Waxay saameyn ku leeyihiin danaha bulshada, qaranka iyo kan adduunka. Waxay ku dhufanayaan unugyada bini-aadamka; waxay diidaan xaqiiqada, waxay qaataan been abuur, waxay weeraraan dareenka akhlaaqda ee saxda ah ama khaldan, waxay saameeyaan wanaaga iyo sharafta maskaxda; waxay ku andacoodaan inay tahay wax kasta oo karti iyo karti u leh aasaasaha dhaqankooda, haweeney qabatimay inta badan itaal darrida noocyadeeda bini'aadamka; waxay ka dhigi doonaan oo hoos u dhigi doonaan dunida ruuxiga ah inay u adeegaan dhulkan jireed; Diintooda diinta waxay u muuqataa inay tahay, ujeedadeeda ugu weyn, oo keliya daaweynta cudurka, iyo raaxada jirka jirka. Kaniisadda saynisyahannada masiixiga ah ayaa lagu aasaasay oo lagu dhisayaa daaweynta jirrooyinka jidhka, iyada oo indhaha loogu hayo xaaladaha jidhka. Diinta oo dhan ee sayniska masiixiyiintu waxay isu rogtaa guusha adduunyada iyo ku noolaanshaha nolosha jidhka; in kasta oo ay sheegato inay tahay mid ruuxi ahaaneed asal ahaan, ujeedo, iyo dhaqan ahaan. Guusha nolosha iyo caafimaadka jirku waa sax oo waa sax; laakiin waxaas oo dhan oo lagu dhisayo kaniisadda sayniska masiixiga, waxay ka fogaataa cibaadada Masiixa iyo Ilaaha runta ah. Iyada oo saynisyahannada masiixiga ah, iyaga oo ka xukumaya sheegashadooda, Ilaah ugu horrayn ujeeddadiisu waa ka jawaabidda ducadooda. Masiixu wuu jiraa laakiin muuqaal ahaan waa in la tilmaamo si loo caddeeyo in saynisyahan Masiixiyiintu waajib ku tahay dhaqankiisa, iyo meeshii ay ka ahayd Ilaah ama Masiixa iyo diinta, Mrs. Eddy ayaa iyaga ka sarraysa oo ku sharfay sharaf weyn oo sharaf leh Iyagu waa waano dulqaad badan, oo amarkiisu yahay mid la fududaysan karo oo aan macquul ahayn, oo aan innaba wax laga beddelin ama wax beddel ah lagu sameeyo.
Saddexda weedhood ee ku xusan warqaddu waa ka jawaabeen
Xukunka soo socda, si kastaba ha ahaatee, wuxuu soo bandhigayaa waji ka duwan, in kasta oo uu wali ka hadlayo mowduuca magdhowga. "Su'aashan waxaa xalliyay kaniisadda masiixiga ee Christian-ka iyada oo loo eegayo si ku habboon isla markaana ku qanacsan dhinacyada iskood ah."
Sidaas uun; laakiin tani waa uun waxa siyaasad kasta oo musuqmaasuq ama waxa loogu yeero urur diimeed ay oran karaan ku saabsan dhaqankooda. In kasta oo loo tixgelin karo inuu yahay mid ku habboon isla markaana ku qanacsan saynisyahannada Masiixiyiinta ah, haddana uma ahan dadweynaha wixii intaa ka badan haddii ay noqon lahayd haddii maxaabiista magangalyada waalacsan loo oggolaado inay sameeyaan waxa ay u maleyn karaan inay qabaan fikrad ah inay si ku habboon oo habboon u habboon yihiin. .
Qoraaga warqaddu wuxuu ku soo gabagabeeyey isagoo leh: “Si kasta ha noqotee waa in ay oggolaadaan dhammaan kuwa raba in ay ula dhaqmaan maaddada si caddaalad ah, in haddii ay sax tahay in la bixiyo wadaaddada si ay u wacdiyaan oo u duceeyaan bukaanka in laga bogsado, waa sidoo kale waxay xaq u leeyihiin in ay bixiyaan khidmada Sayniska Masiixiyiinta ah adeegyadan.
Mar labaad waxaan dareenka u soo qaadnay caddaalad darrada in la isku dayo in la tuuro eedda, haddii eedeyntu jirto, wadaaddada kaniisadda masiixiga, iyo inaan ka cudurdaaranno ficillada saynisyahannada Masiixiyiinta ah ee ku saabsan dhaqanka wadaadnimada Masiixiyiinta. Kaniisadda masiixiga maahan wax caado ah in wadaadku helo mushaharka loogu tukado bukaanka. Isaga, sida uu tilmaamey saynisyahanka Masiixiyiinta ah, wuxuu helayaa mushahar go'an oo loogu talagalay injiilka injiilka isaga oo ah wasiirka kiniisadda, oo aan u noqon sidii bogsiile. Laakiin su’aasha ku lug leh ma aha inay sax tahay ama khalad tahay in la bixiyo wadaaddada si ay u wacdiyaan oo ay u duceeyaan bogsashada bukaanka, sidaa darteedna ay cudurdaar u siiyaan saynisyahannada Masiixiyiinta ah adeeggaas oo kale.
Isku dayga ah in lagu tuuro doodda wadaadada masiixiga ah waxay daciifineysaa dooda saynis yahanku. Su’aashu waxay tahay: sax ma saxbaa mise khalad in lacag laga qaado hadiyadda ruuxiga? Hadday khaldan tahay, markaa wadaadku ha sameeyo ama ha yeshee, marmarsiinyo uma aha been abuurka ama sheegashada ay sameeyeen saynisyahano Christian ah.
Marka loo eego aasaaska sayniska masiixiga, waxay umuuqataa in suurtagalnimada suurtagalnimada in lacag laga helo uu isagu barayo caqiidooyinka sayniska masiixiga ah ama daweynta, ama iskuday lagu daaweynayo, cudurada jir ahaaneed ee meesha laga saaray, in dhaqanku joogsan doono, maxaa yeelay Kuwa sameeya cilmiga sayniska masiixiga ayaa luminaya ixtiraamka ay u qabaan, ama aan faa iido ugu lahayn. Marka laga hadlayo mu'miniinta cilmiga masiixiga, haddii daaweynta jirrooyinka jirka la baabi'iyo, aasaaska caqiidadooda caqiidooyinka sayniska masiixiga waa la burburin doonaa, iyo "ruuxdooda" ay baabi'i doontaa iyadoo aasaaska jireed.